Huawei P30: Dareenka ugu horreeya ee dhamaadka-sare | War gadget
Huawei P30, dareenka ugu horreeya ee muuqaalka cusub ee sumadda sare
Eder Esteban | | Mobiles
Shirkadda Huawei ayaa ugu dambayntii soo bandhigtay dhammaadkeeda sare munaasabad ka dhacday magaalada Paris. Dhamaad sare oo uu hogaaminayo Huawei P30, taas oo ah waxa magac u siiya qoyskan taleefannada ah nooca Shiinaha. Soo bandhigid aan hayno awood u yeelatay inaad si toos ah ula socoto oo aan ku ogaanay taleefankan cusub ee shirkadda. Maxaan ka filan karnaa?
Waxaan horeyba gacanta ugu hayney Huawei P30, sidaa darteed waxaan kuu sheegeynaa dareenkeena ku saabsan sumaddan cusub ee dhammaadka-sare leh. Taleefan aan mar kale ku aragno horumarka weyn ee shirkadda Huawei ee dhamaadka-sare ay ka sameyneyso suuqa. Ha seegin heerkan sare!
Faahfaahin buuxda Waxaad ka akhrisan kartaa taleefankan cusub halkan, qodobka aan ku soo ururinnay soo bandhigidiisa. Marka xigta, waxaan kaaga tagi doonnaa dareenka ugu horreeya ee Huawei P30 uu naga tagay. Goor dhow waxaan idin la yeelan doonnaa gorfeyn dhameystiran oo heer sare ah oo idiin diyaar ah.
1 Naqshadeynta iyo qalabka
2 Processor, RAM, kaydinta iyo batteriga
3 Kaamirooyinka Huawei P30
Naqshadeynta iyo qalabka
Jaleecada hore, waxaad horeyba u aragtay farqi cad oo udhaxeeya Huawei P30-kan iyo qaabka la bilaabay sanadkii hore. Astaantu waxay dooratay darajo hoose, oo ah qaab dhibic biyo ah oo shaashadda ah. Waa qaddarin caqli-gal ah, oo aan xukumin naqshadda hore ee aad u badan. Inta soo hartay, waxay dooratay inay yareyso looxyada sida ugu macquulsan, iyadoo ka faa'iideysaneysa dhanka hore ee qalabka. Mar labaad, summaddu waxay u heellan tahay isticmaalka muraayadaha qalooca. Taas oo u oggolaaneysa adeegsi aad u raaxo badan.
Huawei P30 wuxuu leeyahay shaashad OLED 6,1-inji ah, oo leh Full HD + xallinta 2.340 x 1.080 pixels, oo leh saamiga shaashadda 19,5: 9, sida caadiga ah kiisaska noocaas ah ee leh qaan-gaar ah. Dareeraha sawirka faraha ayaa lagu dhex daray shaashadda qalabka, maaddaama aan horayba ugu aragnay moodallo badan oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya. Dhinaca hore waxaan ka helnaa hal kamarad, halkaasoo aan sidoo kale ku furno wejiga. Waxbadan ayaan kaaga sheegi doonaa kamarada gadaal.
Dhabarka dambe ayaan ka helaynaa kamarad gadaal ah oo sedex laab ah aaladda, oo isugu jira dhowr lenses. Moodooyinka sanadkan, Huawei waxay soo bandhigtay midabyo cusub. Waxaan haynaa classics sida madow ama caddaan, iyo sidoo kale midabyo cusub, oo loogu yeero inay ka guuleystaan ​​macaamiisha. Marka isticmaalayaashu waxay awoodi doonaan inay doortaan kuwa ay aadka u jecel yihiin. Jidhka taleefanka ayaa dib loogu qaabeeyey muraayad, isaga oo siinaya muuqaal heer sare ah mar walba.
Guud ahaan, naqshadeynta waxay lamid tahay P30 Pro. Kaliya qaabkani waa xoogaa yar cabir ahaan, maadaama Pro uu leeyahay shaashad 6,47-inch ah, halka qaabkani wuxuu joogaa 6,1 inji. Laakiin labada xaaladoodba waxaan leenahay isku xalin iyo isku OLED guddi.
Processor, RAM, kaydinta iyo batteriga
Sida la filayo, tan 'Huawei P30' waxay isticmaashaa Kirin 980 taas oo ah processor-ka ugu awoodda badan ee ay summaddu maanta haysato. Processor oo si weyn u adeegsada sirdoonka macmalka ah, oo leh unug gaar ah. Sirdoon loo adeegsado taleefanka guud ahaan, marka lagu daro kaamirooyinka. Xaaladdan oo kale, hal isku-darka RAM iyo kaydinta ayaa loo isticmaalaa, 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ah kaydinta gudaha ah. In kastoo adeegsadayaashu ay lahaan doonaan suurtagalnimada in la ballaariyo meelaha lagu keydiyo. Markaa haddii ay intaa ka sii badan u baahdaan, dhibaato ma noqon doonto.
Batariga, waxaan sidoo kale ka helnaa horumarin shirkadda. Xaaladda Huawei P30, waan helnaa batari awood leh oo ah 3.650 Mah. Waxay sidoo kale lahaan doontaa SuperCharge brandka Shiinaha ee lacag bixinta degdegga ah. Waad ku mahadsan tahay, waxaa suurtagal ah in lagu buuxiyo 70% batteriga kaliya 30 daqiiqo. Taas oo shaki la'aan noqon doonta mid waxtar badan u leh dadka isticmaala dhammaan noocyada xaaladaha kala duwan.
Marka lagu daro processor-ka, waxaa la filayaa in baytarigu na siinayo ismaamul wanaagsan. In kasta oo ay kaladuwan yihiin, Huawei sida caadiga ah sifiican ayey ula kulantaa dhinacan. Dheeraad ah, Waa inaan ku darnaa inay horeyba ula timid Android Pie oo leh EMUI 9.1. Marka nidaamka qalliinka laftiisu horeyba wuxuu u leeyahay shaqooyin kala duwan oo gacan ka geysta sidii si wanaagsan loogu maareeyo batteriga. Sidoo kale waa in aan iloobin in aan leenahay guddi OLED ah, oo adeegsiga tamartu ka hooseeyo. Marka la soo koobo, walxaha ka caawiya yareynta isticmaalka taleefanka mar walba.
Kaamirooyinka Huawei P30
Sannadkii hore qiyaasta P20 waxay ahayd horumar weyn oo loogu talagalay sawir qaadista noocyadan. Sannadka 2019, sumaddu waxay qaadaysaa tallaabo kale oo ah jihadaas noocyadan ah. Huawei P30 wuxuu adeegsadaa kamarad gadaal saddex laab ah ah. Iyagu isku mid maaha kamaradaha aan ka helno P30 Pro, in kasta oo ay ku kala duwan yihiin wax yar guud ahaan. Kaamirooyinka qaar oo shaki la’aan balan qaadaya inay awoodaan inay sawiro waaweyn qaadaan. Sida kuwa kale ee casriga ah noocyada casriga ah, waxaan ku dhex leenahay iyaga garashada Cilmiga Artificial.
Waxaan ka heli a isku darka saddexda dareemayaal: 40 + 16 + 8 MP. Mid kasta oo ka mid ah dareemayaasha waxaa loo xilsaaray hawl gaar ah. Waxaan leenahay dareemaha ugu weyn ee 40 MP, oo leh aperture f / 1.6 iyo a RGB sensor oo dib loo naqshadeeyay astaanta, si aan ugu yeelano xasaasiyad weyn iftiinka. Dugsiga sare waa 16 Xildhibaan oo leh aperture f / 2.2 kan seddexaadna waa 8 MP oo leh aperture f / 3.4. Isku-dhaf xoog leh oo caddaynaya sida ay uga go'an tahay astaanta sawir qaadista.
Halka dhinaca hore aan ku leenahay hal shiddo. Huawei waxay isticmaashay kamarad 32 MP leh f / 2.0 aperture isku mid ah Dareemayaashaan waxaan sidoo kale kaheleynaa aqoonsiga wajiga furitaanka qalabka. Marka waxaan u adeegsan karnaa labada nidaam midkaan sare.
Toddobaadyo gudahood waxaan rajeyneynaa inaan helno falanqaynta Huawei P30-kan oo diyaar ah. Hadda waxaan ku sameyn karnaa fikrad cad oo ah waxa nooga tagaya xadkaan sare. Naqshad mar kale muujineysa horumarka ay qeybtani ku leedahay astaanta Shiinaha. Taabasho noocee ah ayuu taleefanka kaa tagaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Huawei P30, dareenka ugu horreeya ee muuqaalka cusub ee sumadda sare
Sidee loo kala qaadaa PDF